बीस बर्ष मुनिका चारसय गर्भवती ! NewsButwaltoday
उप महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाको तथ्यांक अनुसार उपमहानगर पालीकामा २० वर्ष भन्दा मुनिका ३७५ महिला गर्भवती भएका छन् । यो तथ्यांक हेर्दा अझै पनि बालविवाह न्यूनीकरण नभएको पाइएको महाशाखाका जनस्वास्थ्य निर्देशक बिमल केसीले बताए । चालु आर्थिक वर्षको आठ महीनामा ३७५ किशोरी गर्भवती जाँच गर्न आएको केसीको भनाई छ । साथै चालु आर्थिक बर्षमा २० वर्ष भन्दामुनिका १७ जनाले गर्भपतन गराएका छन् । “अझै पनि तुलसीपुरमा बालविवाह न्यूनीकरण हुनसकेको छैन, गर्भपतन र अस्थायी साधन प्रयोगगर्ने किशोरीहरुलाई हेर्दा डरलाग्दो स्थीति छ” केसीले भने । अहिले उप महानगरपालीका भित्रका शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरुको तथ्यांक हेर्ने हो भने २० वर्ष भन्दा मुनिका ११ जनाले पिल्स, १८३ जनाले डिपो, ८२ जनाले इम्पलान्ट, आठ जनाले आइयुसिडी जस्ता अस्थायी साधनहरु प्रयोग गरीरहेका छन् ।
स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार अस्पताल गएर गर्भवती हुनेको सङ्ख्या भने बढ्दै गएको पाइएको छ । महाशाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म एक हजार २८९ जना महिला अस्पताल गएर गर्भवती भएका छन् । उक्त तथ्याङ्क अनुसार एक हजार ८२ सामान्य, १४ को उल्टो बच्चा भएको, भ्याकुम मार्फत ११, अप्रेसन गरेर ७७ र जन्मेकामध्ये आठको मृत्यु भएको छ । एकदमै कम तौल १ दशमलव ५ केजी भएका बच्चा पाँचजना जन्मिएका छन् । महाशाखाका निर्देशक केसीका अनुसार १ दशमलव ५ केजी देखि २ दशमलव ५ केजी तौल भएका बच्चा ११९ र सामान्य तौल २ दशमलव ५ केजिदेखि माथि तौल भएका बच्चा एक सय ६० जन्मीएको उनले बताए । उनले उप महानगरपालिका र अस्पतालले तुलसीपुरमा प्रोत्साहन स्वरुप रु पाँच हजार भत्तावितरण गरेको भए पनि अझै पनि नियमित जाँच गराउन नआउने गरको उनले जानकारी दिए । धेरै महिलाले स्तनपान नगराउने तथा उमेर नपुग्दै बच्चालाई खाना खुवाउने गरेको पाइएको समेत उनले जानकारी दिए । बच्चालाई दुई वर्षमा २४ पटक तौल जाँच गर्नुपर्ने भए पनि अहिले पनि त्यसो नगरेको पाइएको उनको भनाइ छ । अहिले उपमहानगरका १९ वटै वडामा स्वास्थ्यको पहुँच भए पनि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा समस्या हुने गरेको केसीले बताए ।
उपमहानगर स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालले अझै पनि वैज्ञानिक आधारबिनाको उपचार पद्दतिले जरो गाडिरहेको बताउछन् । अन्धविश्वासका कारण स्वास्थ्य संस्थामा नियमित उपचार गराउन महिलाहरु नआउने गरेको दाहालको भनाई छ । “अहिले पनि मुटुका बिरामीलाई परेवाको दिशा खुवाउने चलन कायमै छ, यस्तो उपचार पद्दतिले बिरामीलाई नोक्सान पु¥याउछ” दाहालले भने । अझै पनि थारु समुदायमा गुरुवाले सर्पले टोकेका बिरामीको उपचार गर्ने गरेको उनले बताए । थारु समुदायमा गरिएको सर्वेक्षणमा खानपिनमा ध्यान नदिने, शारीरिक ब्यायाममा ध्यान नदिने गरेको पाइएको डा. दाहालले जानकारी दिए ।
अपडेट : 2019-05-05 17:01:06